तथ्य जाँच: कोभिड को अर्थ 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको खोपको पहिचान प्रमाणपत्र' हो? - THIP Media
तथ्य जाँच: कोभिड को अर्थ ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको खोपको पहिचान प्रमाणपत्र’ हो?
के कोभिड को अर्थ “कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको खोपको पहिचान प्रमाणपत्र” हो?
कोविड -१९ रोगको नामकरण कसले गर्यो?
भाइरसको नामकरण कसरी गरियो?
एउटा ट्विटर पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि कोभिड को पुरा अर्थ “कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको खोपको पहिचान प्रमाणपत्र” हो। यो एउटा झूटो दाबी हो।
ट्विटरमा साझा गरिएको उक्त पोष्टमा दाबी गरिएको छ कि कोभिड को पुरा अर्थ “कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको खोपको पहिचान प्रमाणपत्र” हो। उक्त पोष्टको स्न्यापशट तल दिइएको छ र यसको सङ्ग्रहित संस्करण यहाँ हेर्न सकिन्छ। उक्त पोष्ट राइट टु ट्रुथ मिडिया भन्ने एउटा ट्विटर प्रोफाइल द्वारा साझा गरिएको छ र यस प्रोफाइलले सत्य कुराहरू खुलाउने दावी गर्दछ।
होइन, यो कोभिड को सहि पूर्ण अर्थ होईन। कोभिड मा “CO” कोरोना को संक्षिप्त हो भने “VI” भाइरसको संक्षिप्त हो र रोगका लागि “D” प्रयोग गरिएको हो । संख्या 19 यस रोगको पहिलो प्रकोप (२०१९) लाई दर्साउन प्रयोग गरिन्छ।
फरवरी ११, २०२० को दिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले यस भाइरसको आधिकारिक नाम कोभिड-१९ राख्ने निर्णय गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एड्हानो गेहेब्रेयससले जेनेभामा यस भाइरसको नामकरण गर्दै पत्रकारहरूलाई भन्नु भएको थियो, “हामीसँग यस रोगको नाम छ र यो कोभिड १९ हो।
फेब्रुअरी ११, २०२० मा डब्ल्यूएचओ ले कोभिड-१९ नाम घोषणा गरेको जिनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको संक्षिप्त जानकारी तल दिइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व पशु स्वास्थ्य संस्था र खाद्य तथा कृषि सङ्गठन बीच २०१५ मा निर्णय गरिएको दिश निर्देशहरू अनुसार भाइरस वा रोगहरूको नामकरण गरिन्छ। डब्ल्यूएचओ को वेबसाइट अनुसार, “भाइरसको नामकरण नैदानिक परीक्षण, खोप र औषधी विकास गर्न मद्दत पुर्याउन भाइरसको आनुवंशिक संरचनाको आधारमा गरिन्छ। यो कार्य भाइरस विज्ञानी र व्यापक वैज्ञानिक समुदायले गर्छन्, त्यसैले भाइरसहरूको नामकरण अन्तर्राष्ट्रिय भाइरस वर्गीकरण समिति (आईसीटीवी) द्वारा गरिन्छ। रोगहरूको रोकथाम, प्रसार, प्रसारण, गम्भीरता र उपचारमा छलफल गर्न सकिने गरि रोगहरूको नामकरण गरिन्छ। ”
Previous articleतथ्य जाँच: के लसुनले क्यान्सर निको पार्न सक्छ?
Next articleभारतीय विद्यार्थी रामुले मरिच, अदुवा, र मह प्रयोग गरि कोभिड को उपचार खोजी गरेका छैनन्